Iyo Telegraph vs. Wikipedia. Inokodzera iyo se "wokepedia" | Linux Vakapindwa muropa
Wikipedia yakave inonyanya kufarirwa rezita renyika. Muchokwadi, ndakamubvunza kuti ndiwane imwe data yechinyorwa ichi. Nekudaro, sKururamisira kwakadaidzirwa mumakore apfuura. Vazhinji vedu takafunga kuti dambudziko raive rekuti pakushanda nevanozvipira, avo vaikurudzirwa vaisa maonero avo. AsiSekureva kwaAndrew Orlowski, munyori weDaily Telegraph, panogona kunge paine zvimwezve.
2 Iyo Telegraph vs. Wikipedia
3 Sei tichifanira kuva nehanya?
3.1 Iyo GNUpedia
Ngatitange nekutsanangura izwi rekuti "kumuka" Pakutanga yainongedzera kune yakasununguka maitiro kune izvo zvido zvevashoma uye neropafadzo mamiriro evachena. Muchokwadi, mhedzisiro yekutanga yeGoogle inongokuratidza iyi tsananguro uye, kunyangwe Wikipedia ichibvuma kuti izwi iri rinoshandiswawo mune zvisina kunaka, rinobatanidza mashandisiro aro kune vane rusaruro, vanochengetedza uye vezvematongerwo enyika.
Ngatitendeukei kuduramazwi reUrban.
Yekunyepedzera kana kunyepa kwekuziva.
Chiito chekunyanyisa kunyepedzera nezvekuti une hanya zvakadii nenyaya yemagariro
Iyo Telegraph vs. Wikipedia
Con siginecha naAndrew Orowsky, bepanhau reBritain rinotanga nekuramba mufananidzo weprojekti inoda rubatsiro rwekukurumidza rwevashandisi mipiro kuti vawane raramo. Ngatitii, tichiita kuenzanisa neLinux kugoverwa, iri padyo nekuve Red Hat kupfuura Debian
MaWikipedia mashandiro, zvinoenderana nedatha yakaunganidzwa nechinyorwa, inoda madhora gumi miriyoni. Uye, zvaigona kuitwa pasina ivo sezvo chero nzvimbo yekudzidzira inogona kukupa iyo komputa zviwanikwa zvaunoda. Chirongwa chazvino chekutsvaga mari chakasimudza mamirioni gumi nemana.
Mumashoko aMichael Olenick, muongorori weINSEAD bhizinesi chikoro, uyo ari kutsvaga hwaro.
Vanhu vanozvitora sezvisina basa kuti kamubatsiro kanotapira kasingaite chakaipa uye hakukuvadzi zvachose, asi hapana kana icho chiri chokwadi, ”anodaro Michael Olenick, munzveri weINSEAD bhizinesi chikoro uyo akadzidza basa iri.
Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti dzakasiyana shanduro dzeWikipedia dzinowana kushanyirwa kwakawanda kupfuura chero webhusaiti yechero midhiya pasi (23 bhiriyoni inodzvanya pamwedzi). Ino zvakare inzvimbo yekutanga uko Siri ne Alexa kutsvaga mhinduro dzemibvunzo yevashandisi vavo uye, zvinyorwa zvavo zvinowana mhedzisiro yekutanga mune mamwe mainjini ekutsvaga.
Kana tichitaura nezve Wikipedia tinotaura nezvezvinhu zviviri; iyo wikipedia.org webhusaiti uye rubatsiro runonzi Wikimedia.org iri pamusoro pekuunganidza pamwe nekugadzirisa mari.
Munhu wekutanga anotarisira manejimendi aive inotangazve tangazve. Carolyn Bothwell Doran paakapihwa basa semukuru wezvekuita, aive nerekhodi rematsotsi uye aive pamuedzo wekurohwa nekumhanyisa kutyaira akafurirwa.
Rekodhi yake yaisanganisirawo kutongwa kwekutadza kutarisa kunyora, kuba, kuba, dzimwe mhosva dzekutyaira pasi pekufurira uye kukuvadza mukomana wake nepfuti pachipfuva
Chii chinoitwa nenheyo nemari yakawanda kudaro? Kubhadhara vanobatsirana zvirokwazvo kwete. Asi, Iine vashandi mazana mana nemakumi mana vasingaverenge mumwe wekunze makondirakiti anosanganisira emafemu emutemo uye vanokwezva.
Mumwe kontrakta akadaro Craig Minassian, nyanzvi yehukama neruzhinji yakabatana zvakanyanya neClintons. Kunyorwa kwechinyorwa ichi kuri kuvhiringidza panguva ino uye hazvina kujeka kana Minassian aine chekuita nazvo kana kwete. Chokwadi ndechekuti mari yekuwedzera yasara neWikimedia Foundation enda (sekureva kweTeregraph) kune inonzi Tides Foundation. Iri sangano rinotendera vanopa rubatsiro kutsigira leftist inokonzera kusazivikanwaVatsoropodzi vanofunga kuti Democratic Party inoishandisa kurasa mari isina kuzivikanwa.
Sei tichifanira kuva nehanya?
Ngatitii izvo zvinotaurwa nepepanhau ndezvechokwadi (handisi kuti hazvisi, ndiri kuti handizive) Tinogona kuzvibvunza kuti zvakakosha sei izvo zvakavanzika hwaro nemari yayo. Hazvipe basa rinobatsira here?
Pakati peavo vanofunga kuti Wikipedia ine zvematongerwo enyika Larry Sanger, muvambi weprojekiti naJimmy Wales, Sanger anopa semuenzaniso kuenzanisa pakati pekupinda kwaObama neyaTrump. Vamwewo vanotaura kuti ezvematongerwo enyika nehupfumi zviono zvezvinyorwa zvinoenderana neizvo zvemakambani makuru eetekinoroji. Zvakaoma kuwana chero kutsoropodzwa kwavo.
Richard Stallman anga aronga enisaikoropidhiya pasi pemisimboti yeGNU, asi, zvakapihwa kuti Wikipedia yakawedzera simba kubva kubhizimusi reGNU, vakapedzisira vakurudzira vavanoshanda navo kuti vapinde muchirongwa chitsva ichi.kusvika, panguva iyoyo yainzi Nupedia. Tichifunga nezve mhedzisiro isu tinofanirwa kuzvibvunza isu kana iri zano rakanaka.
Ndiri kuburitsa ino chinyorwa pamwe nezvose zvakachengetedzwa zvemhosva. Zvinotaurwa nenhepfenyuro yechinyakare nezvemukwikwidzi mutsva zvinofanirwa kutorwa nezviyo zvemunyu. Asi, Chokwadi ndechekuti Wikipedia nhasi inozvimiririra uye, chero munhu anozvimirira anoona (angangoita yayo yeArgentina vhezheni) anoziva kuti kune rusaruro.
Zvirinani, iyo Wikimedia Foundation inofanirwa kupindura nekuvhura mabhuku ayo kunharaunda, uye nekukurudzira zvirinani zvemukati curation chirongwa. Kunyange ichidaro, muLinux Vakapindwa muropa isu takatofunga dzimwe nzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo Telegraph vs. Wikipedia. Iye anokodzera iyo se "wokepedia"
Chinyorwa chinonakidza. Ndatenda.
Nehurombo pandakaverenga Wikipedia kuti vanonyora zvinhu senge "Zvese", "Vaverengi nevaverengi" nezvimwe, zviri kutondipa maitiro ekusarura. Yakagara kubvira yarega kuva (zvirinani kwandiri) chinhu chisina kwachakarerekera.
Andreas Kolbe akadaro
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvemari zveWikimedia uye hunhu hwekutsvaga mari muLatin America panguva ino, ona…
… Yakabudiswa Muvhuro uno.
Pindura Andreas Kolbe
Iyo Wikimedia fundraising mireza yakaratidzwa paWikipedia nguva dzose inoita kuti zviite senge sangano rakanga richipererwa nemari uye richinetseka kuchengeta Wikipedia online. Hapana chingave chinopfuura icho kubva pachokwadi. Gore rega rega, Wikimedia yakatora mari yakawanda kupfuura gore rapfuura. Mukati megore ra2010, mari yaro yakawedzera ka15. Kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama nezve hupfumi iyo Wikimedia Foundation yave, zvichienzaniswa nemakore mashoma apfuura, ona uyu Daily Dot chirevo:
Iyo Wikimedia Foundation yekutsvaga mari mabanner akaratidzirwa paWikipedia nguva dzose zvinoita kuti zviite senge sangano rakanga richipererwa nemari uye richinetseka kuchengetedza Wikipedia online. Hapana chingave chinopfuura icho kubva pachokwadi. Gore rega rega, Wikimedia yakatora mari yakawanda kupfuura gore rapfuura. Mukati megore ra2010, mari yaro yakawedzera ka15. Kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama nezve hupfumi iyo Wikimedia Foundation yave, zvichienzaniswa nemakore mashoma apfuura, ona uyu Daily Dot chirevo: